ချစ်မိသွားတဲ့အခါ …. - Myanmarload
လွန်ခဲ့သော ၃ နှစ် က 15:50 July 04, 2017
အချစ်ဆိုတာ လူတိုင်းနဲ့ မကင်းနိုင်တဲ့ အရာမျိုးပါ။ လူတစ်ယောက်ကို ချစ်မိပြီ ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ မသိစိတ်က ဘာတွေ လုပ်တတ်လဲ? ကိုယ် ဘာတွေ ပြောင်းလဲသွားလဲ? ဆိုတာလေးကို လေ့လာကြည့်ရအောင် …
ဥပမာ- ကိုယ်က သူကို့ တကယ် ချစ်မိနေပြီလား ? ဒါမှမဟုတ် သူကရော ကိုယ့်ကို တကယ်ချစ်ရဲ့လား? ဘဝလက်တွဲဖော်အဖြစ် စဉ်းစားပြီလား ? စသည်ဖြင့်လည်း နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လို့ ရပါတယ်။
၁) သူ့ကို စံနမူနာ ထားလာတယ်။
ချစ်ခြင်း၏ အစ အထင်ကြီးခြင်းက လို့တောင် တစ်ချို့ ပြောတတ်ကြပါတယ်။ မချစ်မိခင် သူ့ကို စပြီး သတိထားမိရတဲ့ အကြောင်းရင်းက ကိုယ် သဘောကျတဲ့ အချက် တစ်ခုခု သူ့မှာ ရှိနေလို့ပါ။ ဒါ့ကြောင့် လူတိုင်းတော့ မဟုတ်ပေမဲ့ အများစုကတော့ ကိုယ့်ချစ်သူကို စံနမူနာ ထားပြီး သူ့ထက် မညံ့အောင် ကြိုးစားတတ်ကြပါတယ်။
၂) သူနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကဗျာတွေ၊ စာတွေ ရေးလာမယ်။
ဒါကတော့ ချစ်သူတိုင်း၊ crush တိုင်း လုပ်နေကြလို့ ထင်ပါတယ်။ ကဗျာဆန်တတ်လာမယ်။ စကားလုံးတွေ ကြွယ်လာမယ်။ အနုပညာဆိုတာကလည်း အချစ်နဲ့ တိုက်ရိုက်ပတ်သက်နေပါတယ်။ သူနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သင် ဒီလိုတွေ လုပ်လာပြီဆိုရင်တော့ သူ့ကို တကယ် ချစ်မိသွားတာ သေချာပါပြီ။
၃) သူနဲ့အတူ အချိန် ကုန်ဆုံးချင်လာမယ်။
အလုပ်ရှုပ်နေတုန်းတော့ အများစုက ကိုယ်ချစ်နေတဲ့ သူကိုတောင် သတိမရနိုင်ကြပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အားလပ်ရက်မှာ သူနဲ့ တွေ့ချင်တာမျိုး၊ အားနေတဲ့ အချိန်လေးမှာ သူ့ကို ဖုန်းခေါ်မိတာမျိုး စသည်ဖြင့်တော့ အမှတ်မထင် လုပ်မိတတ်ကြပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ပိုနေတဲ့ အချိန်တွေကို သူနဲ့ အတူ ဖြုန်းချင်တယ်။ တစ်ချို့ဆို အချိန်မပိုရင်တောင် မအား အားအောင် အချိန် ဖဲ့ပေးတတ်ကြပါတယ်။ ဒါဟာ တကယ်ချစ်မိနေလို့ပါပဲ။
၄) ဖြတ်သန်းခဲ့့ရတဲ့ အခက်အခဲတွေ ပြောပြမိလိမ့်မယ်။
ကိုယ့်ဘဝရဲ့ ပင်ပန်းဆင်ရဲ ခဲ့ရတာတွေကို မရှက်မကြောက် ရင်ဖွင့်ခဲ့တယ် ဆိုရင်တော့ ဒါက ယုံကြည်မှုပါပဲ။ အချင်းချင်း ယုံကြည်လို့သာ ရင်ဖွင့်ပြောပြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အားငယ်ခဲ့ရတာတွေ၊ ဝမ်းနည်းခဲ့ရတာတွေကို ပြောပြပြီး ကိုယ်ရဲ့ ကြိုးစားရပ်တည်မှုကို ပြောပြခြင်းဖြင့် သင့်ဆီက ဂရုဏာကို တောင့်တမိတာပါ။
၅) ရည်းစားဟောင်းနဲ့ ယှဉ်ပြီး ကောင်းတဲ့အချက်တွေ တွေးလိမ့်မယ်။
ရည်းစားဟောင်း မရှိတောင်မှ ကိုယ်ချစ်ခဲ့ရတဲ့ အချစ််ဦး (သို့မဟုတ်) သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ရည်စားတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ် လာပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ထက် သာတဲ့ အချက်တွေကိုပဲ သင် တွေးဖြစ်နေမှာပါ။ ဒီလို ဒီိလို အချက်တွေကြောင့် ငါ သူ့ကို ချစ်မိတာပါလို့လည်း တွေးမိပါလိမ့်မယ်။
၆) ပြင်စေချင််တဲ့ အချက်တွေလည်း ထုတ်ပြောလိမ့်မယ်။
သူ့အကြောင်းတွေးနေရင်း ကိုယ် သဘောကျတဲ့ အချက်ရှိသလို ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ့်မိသားစုကပဲဖြစ်ဖြစ် သဘောမကျနိုင်တဲ့ အချက်လေးတွေလည်း ရှိကောင်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့ ရှေ့လျှောက် အဆင်မပြေမှာ စိုးတဲ့စိတ်၊ မိသားစု (သို့) ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ အဆင်မပြေမှာ စိုးတဲ့ စိတ်ကြောင့် သူ့ကို ပြင်စေချင်တဲဲ့ အချက်လေးတွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း အသိပေးမိပါလိမ့်မယ်။
၇) အနာဂတ်အတွက် တိုင်ပင်တယ်။
အနာဂတ်အတွက် သူ ဘယ်လိုတွေ ပြင်ဆင်ထားလဲ သိချင်လာမယ်။ ကိုယ်လည်း ဘယ်လိုတွေ ပြင်ဆင်ထားလဲ ဆိုတာကို တိုက်ရိုက်မဟုတ်ရင်တောင် ကွယ်ဝိုက်ပြီးတော့ ဖြစ်ဖြစ် ပြောပြပါလိမ့်မယ်။
၈) မိတ်ဆွေ၊ အပေါင်းအသင်းတွေ၊ မိသားစုတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလာတယ်။
ဒါကတော့ အများရှေ့မှောက်မှာ တရားဝင် အသိပေး ကြေငြာလိုက်တဲ့ သဘောပါပဲ။ သင့်ကို လက်တွဲဖော်အဖြစ် ရည်ရွယ်ထားလို့သာ ဒီလို မိတ်ဆက်ပေးတာပါ။
အပြစ်ဆိုတာ မမြင်တော့လောက်အောင်ကို အကောင်းမြင်တတ်လာပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်အတွက်တော့ သူက အားနည်းချက် မရှိသလောက်ပါပဲ။ အများက ပြောရင်တောင် သိပ်ပြီး ဂရုမစို်က်တတ်ကြတော့ဘူးလေ။
၁၀) ကို်ယ့်အတွက် အကောင်းဆုံးလက်တွဲဖော်လို့ ယုံကြည်လာမယ်။
သင် တစ်ယောက်တည်းကသာ လက်တွဲဖော်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ယူဆမိပြီဆိုရင်တော့ ဒါဟာ ဆုံးဖြတ်ချက်် တစ်ခု ဖြစ်သွားပါပြီ။ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့ အနှေးနဲ့ အမြန် သူ ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
အားလုံးပဲ ချစ်ရသူနဲ့ ပေါင်းဖက်နိုင်ကြပါစေ ..